ခရောတို( ကျိုတို ခရိုင်) လည်စရာပတ်စရာနေရာများ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ခရောတို( ကျိုတို ခရိုင်) လည်စရာပတ်စရာနေရာများ
Updated: 2016-06-27 10:42
ရာစက နတ်ဘုရားကျောင်း ဟာ ကျိုတို မြို့ တိုဇန်း နယ် မြေ ဂိအွန်း မြို့ နယ် မှာ တည် ၇ှိ တဲ့ နတ် ဘုရားကျောင်းတော် ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ တစ်နိုင် ငံ လုံး မှာ ရှိ တဲ့ ရစက နတ် ဘုရားကျောင်းတော်ရဲ့ ပင်မကျောင်းဆောင် ပဲ...
Updated: 2016-06-21 14:23
တဲန်းရူးဂျိ ( အိုတဲ ရ )
တဲန်းရူးဂျိ ဟာ ရင်းဇိုင်း ဘာ သာ တဲန်းရူး ဂျိ မျိုး နွယ် ဒိုင်းဟွန်းဇန်း ဘုရားကျောင်းတော် ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ၁၉၉၄ခု နှစ် ၁၂လပိုင်း မှာ ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေး မှု အမွေ အနှစ် စာရင်း ( ကျိုတို ရှေးဟောင်းဘုရား ) စာရင်း...
Updated: 2016-06-21 14:09
ဖူရှိမိ အိနရိ တိုင်း ရှ
ဖူရှိမိအိနရိ တိုင်း ၇ှ ကျောင်း တော်ဟာ ကျိုတို မြို့ ဖူရှိမိ ဒေသ မှာ ရှိ တဲ့ နတ်ကျောင်းတော် တစ် ခု ဖြစ် ပြီး တစ် နိုင် ငံ လုံး ၃သောင်း ကျော်ရှိ တဲ့ အိနရိ နတ် ကျောင်းတို့ ရဲ့ ပင်မကျောင်းတော်ကြီး ပဲ ဖြ...
Updated: 2016-06-21 13:54
ခိကဲန်းဒိုး ( ဇဲန်းရင်းကျောင်းတော်)
မူလကတော့ ဇဲန်းရင်းဘုရားကျောင်း က ဂျောဒို ဘာသာ ၀င် ဘုရားကျောင်း ရဲ့ ပင်မကျောင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၅၃ ခု နှစ် မှာ ခူးကိုင်း ဘုန်းကြီး ရဲ့တပည့် ဖြစ် တဲ့ ရှင်းဂျော ဘုန်းကြီး က ဖူဂျီဝါရာ နော်စဲခိအို ရဲ့ တောင်...
Updated: 2016-06-21 13:32
တိုဂျိ ( အိုတဲရ )
တိုးဂျီ ရှင်းဂွန်း ဘာ သာ တော် ရဲ့ ပင်မကျောင်း ဆောင် ။ ၇၉၄ ခုနှစ် ပြည့် ရဲ့ ဟဲအန်း ခောတ် သာသနာတော် ပြန့်ပွားရေး ဆောင် ရွက် ချက် များ စတင် ပြု လုပ် ခဲ့ ပြီး နှစ်နှစ် ခန့် အကြာမှာ အရှေ့ ဖက် အပိုင်း တွင်...
Updated: 2016-06-20 16:41
ခိတ ဟိုး စိုးရှူး ၊ဟွန်း တောင် ။ နိုင် ငံတော် အနောက်ပိုင်း ခရိုင် အထွက် အမြတ် ထား ရာ နေရာ တစ် ခု ။ ၇၇၈ ခုနှစ်မှာ ထိုတောင် ပေါ် ကို စတင် တက်ရောက် ခဲ့ပြီး တော့ ၇၉၈ ခု နှစ် မှာ Sakanoueno Tamuramaro က တည...
Updated: 2016-06-20 15:48
ကျိုတိုမြို့ ရှောလဲန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း
ကျိုတိုမြို့ ရှောလဲန်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ဟာ ၁၃ ရာ စု နှစ် မှာ တည် ထား ခဲ့ ပြီး တော့ ကျိုတို မြို့ ရဲ့ သဘာဝ မှတ် တိုင် တစ် ခု အဖြစ် သတ် မှတ် ခြင်း ခံ ခဲ့ ရပါတယ်။ နောက် ပြီး ဖုဒိုးမျောနိဒိုးဂျိ နတ်...